DF oo war kasoo saartay xildhibaanada 2-aad ee Baarlamaanka Hirshabelle | Warkii.com
Home warkii DF oo war kasoo saartay xildhibaanada 2-aad ee Baarlamaanka Hirshabelle
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ayaa soo saartay qoraal ay ku soo dhoweyneyso soo Xulista Baarlamaanka labaad ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Bayaan kasoo baxay Wasaaradda ayaa loogu hambeeyeyey Baarlamaanka labaad ee loo dhaariyay Dowlad Goboleedka Hirshabeele iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka qeyb qaatay hannaanka geeddi socodka soo xulista Baarlamanka labaad ee Hirshabeelle.
Sidoo kale bayaanka ayaa lagu yiri “ Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta waxa ay u hambalyaynaysaa Baarlamaanka 2aad ee loo dhaariyay Dowlad Goboleedka Hirshabeele iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka qeyb qaatay hannaanka geeddi socodka soo xulista Baarlamanka 2aad ee Hirshabeelle.
Ugu dambeyntii wasaaradda ayaa guddiga doorashada Hirshabelle ku dhiira gelisay dhameystirka inta ka harsan doorashada madaxweynimo ee maamulkaas.
Halkaan hoose ka akhriso bayaanka kasoo baxay Wasaaradda
Previous articleTop News-China starts once-a-decade census of world’s largest population
Next articleDab ka kacay xaafad ka tirsan Muqdisho